Tolotra « Airtel M’Lay »: fanafainganana ny asa sy fandrindrana ny fotoana | NewsMada
Tolotra « Airtel M’Lay »: fanafainganana ny asa sy fandrindrana ny fotoana
Par Taratra sur 17/06/2019
Tolotra vaovao mifandraika amin’ny fahefa-mividin’ny mpanjifa no atolotry ny Airtel manomboka izao amin’ny alalan’ny « Airtel M’Lay ». Nojerena izay fahefa-mividy izay, hanampian’ny sehatry ny serasera ny fihariana amin’ny ankapobeny sy ny fiarahamonina, tsy hampiverin-dalana ny mpanjifa, araka ny fanazavana nentin’ny tale jeneralin’ny Airtel, i Eddy Kapuku, ny faran’ny herinandro teo. Koa atao indrindra hanampiana ny mpanjifa ny tolotra vaovao maro, hanamora ny fifaneraserana. Ny lafiny fifaneraserana izay manampy betsaka amin’ny asa aman-draharaha, eo amin’ny fikajiana fotoana.
Be loatra ny fotoana lany eto an-dRenivohitra, vokatry ny fitohanan’ny fifamoivoizana, ka tsy ahavitana ny asa ara-potoana. Anisan’ny mamaha ity tolotra “Airtel M’Lay”ity, izay zakan’ny fahefa-mividin’ny rehetra, hanafainganana ny asa sy andrindrana ny fotoana.
Hisian’ny fifandraisana maharitra
Karazana tolotra maromaro no hita, manomboka amin’ny 500 hatramin’ny 24000 Ar ; 24 ora hatramin’ny 30 andro. Samy hanomezana tombony fanampiny (bonus) ho an’ny mpanjifa avokoa ireo, anisan’izany ny fandoavana Jirama amin’ny « Airtel Money ». Ahazoana miantso any amin’ny tambajotra hafa ny tolotra rehetra. Manakaiky kokoa ny mpanjifa rehetra ny tanjona hisian’ny fifandraisana maharitra, manampy ny isam-pianakaviana sy isam-paritra. Nanambara ny mpitantana fa efa nisy ny fijerena ny lafiny teknika mba tsy hampihisatra ny fifandraisana.
Tokony hifameno ny seha-pihariana rehetra hisian’ny fampandrosoana. Maharaka fivoaran’ny teknolojia ny serasera raha eto Madagasikara. Koa misy izao tolotra « Airtel M’Lay » izao ahafahan’ny rehetra mifandray tsy tapaka an-telefaonina sy amin’ny internet, eto an-toerana sy any ivelany. Sehatra iray tokony hanampy tosika izany ny famatsiana herinaratra tsy tapaka amin’ny tanàn-dehibe sy any ambanivohitra.